MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » U San Lwin presented his Credentials to Her Excellency Ms. Dalia Grybauskaite, President of the Republic of Lithuania
U San Lwin, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of Lithuania, presented his Credentials to Her Excellency Ms. Dalia Grybauskaite, President of the Republic of Lithuania on 19 June 2017, in Vilnius.
Dated. 21 June 2017
လစ်သူယေးနီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးစံလွင် သည် ၎င်း၏ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဗေးလ်နီးရပ်စ်မြို့၌ လစ်သူယေးနီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စ ဒါလီယာ ဂရီဘူစကိတ်တေ ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၁ ရက်